देउवालाई प्रकाशमानको काउन्टर, पार्टीभित्रै हुनेभयो यस्तो भिडन्त | राजनीति | साझामन्च
देउवालाई प्रकाशमानको काउन्टर, पार्टीभित्रै हुनेभयो यस्तो भिडन्त
अनलाइन, प्रकाशित मिति : २०७४ ,माघ , २७ 12:15:11
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले काउन्टर दिने भएका छन्। चुनाव पराजयको जिम्मा लिँदै नयाँलाई अवसर दिनुपर्नेमा देउवा आफै पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्न कस्सिएपछि प्रकाशमान काउन्टर दिन अघि सरेका हुन्।
देउवाले संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मती भए महामन्त्री डा. सशांक कोइरालालाई अघि सार्ने भनिएको थियो। तर, अहिले आएर देउवा समूहकै नेताहरुले आँफै उठ्नुहोस् भनेपछि देउवाले सोही अनुसार तयारी थालेका छन् । युवा नेता दिपक खड्काले देउवालाई भेटेर सर्वसम्मती रुपमा नेता बनाउन कन्भिन्स गरिरहेका छन् । तर मानेका छैनन्।
देउवा चुनावी मैदानमा उत्रिने भएपछि उनीसँग प्रतिस्पर्धामा प्रकाशमान सिंह उठ्ने भएका हुन् । चुनावी पराजयदेखि सिंहले आफू संसदीय दलको नेतामा उठ्ने बताउँदै आएका छन्।
हुन त देउवालाई यो पटक संसदीय दलको नेतामा महामन्त्री सशांकलाई छोडिदिन आग्रह गरिएको बुझिएको छ। युवा नेता दिपक खड्काले पटक–पटक भेटेरै देउवालाई ब्याक हुन कन्भिन्स गरे। तर देउवा कन्भिन्स भएनन्। उनी आँफै मैदानमा उत्रिने पक्का भएको छ।
देउवा निकट नेताहरु बालकृष्ण खाँड, डा. प्रकाशशरण महत लगायतले देउवालाई उम्मेद्धवारी दिन आग्रह गरेका हुन्। अहिले महामन्त्री कोइरालालाई दलको नेता बनाउन नहुने देउवालाई उनीहरुले सुझाव दिएका छन्। आफ्ना समूहको नेताको सुझावमा दलको नेता बन्न अघि सरेका देउवाको भिडन्त अब प्रकाशमानसँग हुने भएको छ।